२०७८ श्रावण १८ गते सोमबार
शेर्पा भाषा उद्घोषण विजेता घोषणा साथमा ‘राजु लामा’
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । पौष २५ गते प्रथम शेर्पा भाषा अनलाइन उद्घोषणका विजेता घोषणा हुने भएको छ । रामनगर, रामहिटीमा शेर्पा इभेन्टस् अर्जनाइजरले एक सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरी विजेता घोषणा गर्न लागेको हो ।
शेर्पा परिकार, संस्कृति र ‘भिटेन’ एकै ठाउँमा
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । बार्षिक रुपमा आयोजना हुँदै आएको ‘शेर्पा फुड फेस्टिभल’ माघ ३ र ४ गते अर्थात जनवरी १७ र १८ मा आयोजना हुने भएको छ ।
‘बुद्ध एन्ड द बुलेट’मा छिरिङ शेर्पा
काठमाडौं : ‘मानव जातिमा एउटै समयमा दुई स्वभाव र विचारले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यो काम गरौं कि नगरौं ? कसका लागि यो काम गरिराखेको छु ?
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २’को विजेत राम लिम्बु
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २’को विजेत राम लिम्बु बनेका छन् । अन्तिम चारबाट विजेता चयन गरिएको थियो । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको चर्चित रियालिटी शोको दोश्रो सिजनको विजेता राम बनेका हुन् । कोच प्रमोदको टिमबाट राम विजयी भएका हुन् ।
बुद्ध चिनाउने अभियान
१२ वर्षदेखि ‘बुद्धको भ्रम हटाऊ’ अभियान चलाउँदै आएको छु । यसको समर्थनमा १५ मंसिरमा काठमाडौं वसन्तपुरमा नेपालका ५० जना चित्रकारले ३० फिट लामो बुद्धको पेन्टिङ बनाउनुभएको छ । वरिष्ठ चित्रकार किरण मानन्धरको अगुवाइमा उक्त पेन्टिङ तयार भएको हो ।
मिस्टर एण्ड मिस टीन शेर्पा ‘सिजन २’ शुरु
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । शेर्पा युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन ‘मिस्टर एण्ड मिस टीन शेर्पा’ आयोजना हुने भएको छ । सन् २०२० का लागि प्रतियोगिताको यो दोस्रो सिजन हो ।
गोरखाली गल्र्स व्याण्डको ‘गुन्जिरहेका सपना’ सार्वजनिक
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । गोरखाली गल्र्स व्याण्डको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘गुन्जिरहेको सपना’ व्याण्डको आफ्नै युटुव च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो ।
मानव अधिकार प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा पासाङ निर्विरोध
डा. कुन्जाङ शेर्पा सम्मानित
‘मिसेस मंगोल नेपाल २०२१’को ताज अन्जु शेर्पाले जितिन
९ दिन अघि
जसपा युवा नेता सुनुवारको पहलमा खिजीदेम्बामा स्वास्थ्य सामाग्री
१६ दिन अघि
अन्तरपार्टीमा आङ पेमा शेर्पाको नेतृत्व सफल
कर्मा पहाडी शेर्पालाई किरायाको प्रश्नै प्रश्न ‘तपाई शेर्पा कि ढोक्प्या ?’
१७ दिन अघि
सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई नगद राहत वितरण
१९ दिन अघि
सोनाम शेर्पालाई ‘भ्वाइसअफ नेपाल’ मा जिताउने अभियान शुरु
आगलागी पीडित शेर्पालाई धमाधम सहयोग जुट्दै
२३ दिन अघि